Ozil siyana nazvo: Emery | Kwayedza
Ozil siyana nazvo: Emery
03 Aug, 2018 - 00:08	 2018-08-02T11:19:34+00:00 2018-08-03T00:00:02+00:00 0 Views
MANEJA weArsenal, Unai Emery, otsigira Mesut Ozil kuti asaterere mashoko ekumushoropodza ari kubva kuGermany zvichitevera kusendeka kwaakaita kutambira nyika iyi nhabvu, ndokuti ari kumuona achitamba nhabvu inonwisa mvura mwaka unotevera.
Ozil akasendeka kutambira nhabvu Germany svondo rino zvichitevera kunetsana kwakaitika apo akatorwa mufananidzo aine mutungamiri wenyika yeTurkey, Erdogan, nyika yake yakatarisana nekuenda kumutambo weWorld Cup.
Vanoita zvematongerwo enyika kuGermany uye vanyori vemapepanhau vazhinji vakashoropodza izvi ndokubvunza kuti akazvipira chaizvo here kuGermany pakabuda mifananidzo iyi yaOzil uyo anobva kuTurkey.
Svondo rino mutungamiri weBayern Munich, Uli Hoeness, akapomera Ozil mhosva yekutamba nhabvu yemarara kwemakore akawanda ndokuti chikwata chake chaikanganisika matambiro acho nekuda kwake.
Murairidzi mutsva weArsenal — Emery — ange achitarisira zvimwewo zvitsva apo aitaura nevatori venhau kekutanga kuSouth-East Asia asi mibvunzo yaaibvunza yange ingori yaOzil nedanho raakatora.
Shoko range riri rimwe chete rekutsigira Ozil nedanho raakatora.
“Idanho remwoyo wake rakatorwa naMesut uye ini ndinorikoshesa. Ndiye anofunga zvaanoona zvakamunakira, akatsanangura kwandiri uye isu kuno tiripo kumubatsira chete,” anodaro. — SportsMail Football